Home Wararka Dagaal Khasaare gaystay oo goordhow ka dhacay Magaalada Muqdisho
Dagaal Khasaare gaystay oo goordhow ka dhacay Magaalada Muqdisho
Iska hor imaad u dhaxeeyay ciidamada Nabad Suggida Degmada Dharkiinley iyo Ciidan ka tirsan Maamulka Degmada ayaa wuxuu ka dhacay agagaarka Xaafadda Dabakaayo Madow ee Degmada Dharkiinley.
Hal askari ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay Iska hor imaadkaasi, sidoo kalena waxaa la xaqiijiyay inuu dhaawacmay ruux kale oo ka mid ahaa ciidankii wada dagaalamay.
Qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in xaaladda hadda caadi tahay, kadib iska hor imaadkaasi ciidanka dhexmaray.
Askariga dhintay ayaa wuxuu ka tirsanaa kuwa maamulka Degmada Dharkiinley, halka askari dhaawaca ahna uu ka tirsan yahay ciidanka Maamulka Degmada Dharkiinley.
“Meeshaan iska hor imaad ayaa ka dhacay hal askari ayaa dhintay mid kalena waa dhaawac ciidan ka wada tirsan dowladda waaye cida meesha ku dagaalantay hadda xaaladda waa caadi.” Ayuu yiri qof ka mid ah dadka deegaanka.
Illaa hadda ma cadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysa iska hor imaadka dhexmaray ciidamadaan ka wada tirsan dowladda Federalka Somaliya ee maanta ku dagaalamay Degmada Dharkiinley.
Ciidanka dowladda ayaa sidaan oo kale dhawr mar ugu dhex dagaalamay magaalada gudaheeda.